Ibido Azụmaahịa,Kedụ ka m ga - esi malite azụmahịa nke enweghị ego?
Kwụpụ 1: Mee Nnyocha Gị. ...
Kwụpụ 2: Mee Atụmatụ. ...
Kwụpụ 3: Mee atụmatụ n’ego gị. ...
Kwụpụ 4: Họrọ Businesslọ Azụmaahịa. ...
Kwụpụ 5: Bulie ma Debanye aha Aha Azụmaahịa Gị. ...
Kwụpụ 6: Nweta ikikere na ikike. ...
Nzọụkwụ 7: Họrọ Sistemụ Njikọ Gị. ...
Kwụpụ 8: Tọọ ebe azụmahịa gị.
Kedụ ka m ga - esi malite azụmahịa nke enweghị ego?
Etu ị ga - esi malite azụmahịa mgbe ị na - enweghị ego
Jụọ onwe gị ihe ị ga - eme ma nweta n'efu ..
Wulite ego iji kwụọ ụgwọ ọnwa isii.
Jụọ ndị enyi gị na ndị ezinụlọ gị maka ego ndị ọzọ.
Tinye akwụkwọ maka obere azụmaahịa mgbe ịchọrọ ego ndị ọzọ.
Legodị n’inye ego azụmaahịa na ohere itinye ego n’obodo.
Chọpụta ihe — na woo — ndị nwere ike itinye ego maka mmụọ ozi.